कथा : त्यो रातो स्कुटी !
शनिबारको दिन थियो, चोकमा बसेर साथीलाई कुरिरहेको थिएँ । एउटा रातो स्कुटी टक्क रोकियो मेरो अगाडि । हेल्मेट खोल्दै एक सुन्दर युवतीले सोधी, 'दाइ यतातिर कतै कोठा खाली भएको थाहा छैन तपाईंलाई ?'
मैले पनि मेरो घरतिर देखाउँदै भनिदिएँ, 'उ त्यो नीलो घरमा जानू न, तल्लो फ्ल्याट पूरै खाली छ ।' उसले स्कुटी बटारी र लागि उतैतिर । उ अलिक पर पुगुञ्जेल मैले उसलाई हेरिरहेँ ।
साँझ घर फर्किंदा आमाले भन्नुभो, 'ए कान्छा ! तेरो बाइक राख्ने ठाममा अर्को बाइक अट्छ त ? ' मैले बुझिहालेँ ।
मोरी फिक्स यहीँ बस्ने भइछ । मनमा रातो स्कुटी रोकेर उसले मलाई सोध्दै गरेको सम्झिन थालेँ । 'दिन त राम्रै रहेछ', होस सम्हाल्दै बोलेँ, 'अट्छ, अस्ति विनोद दाइ आउँदा सँगै राख्या हैन र ?'
फेरि मनमा लाग्यो, पाहुना पो आउन लागेका हुन् कि ? कन्फर्म गर्न आमालाई सोधेँ ।
'को पाहुना आउन लाग्या हो र ?'
'पाहुना, साहुना होइन । तल फ्ल्याटको एउटा कोठामा एउटी नानी बस्न आउने भइन्, उनको स्कुटर रहेछ राख्नुपर्‍यो नि ।'
मैले नबुझेझैँ गरेँ, 'ए ए, हुन्छ ।'
मन खुसीले मख्ख पर्यो । त्यै पनि थप कन्फर्म गर्न आमालाई सोधेँ, 'कति जना बस्ने रहेछन् ?'
'बिहे नगरेकी केटी एक्लै बस्ने रे ।' आमाले बेलीबिस्तार लाउनु भो, 'घर इलाम रहेछ । नर्स पढेर सकेको रे विराटनगरबाट । जागिर यहीँको अस्पतालमा परेछ । बिहेबारी नगरेकी केटी परिछ, केटाहरू आइराख्ने हुन् कि ।'
आमाले केटाहरू आइराख्ने हुन् कि भन्दा मनमा चसक्क भयो । आमाको र मेरो चिन्ता मिल्यो, अरू केटा पो आउने हुन् कि । पहिल्यै लभ परिसेकको पनि त हुन सक्छ । तै पनि आमालाई भनेँ, 'त्यति राम्री केटीका के धेरै केटा होलान् र केटाहरू भन्नुभएको नि । आमा पनि जोसुकैलाई शंका गरेर बस्ने ।'
'के भन्छ ? तैँले चिनेको केटी हो र ? राम्री केटी भन्दैछस्', आमाले सोध्नुभयो ।
'कहाँ चिन्नु । नर्सिङ पढेर जागिरसम्म खाइसकेकी भनेपछि त राम्रै होला नि भनेर पो त । पढेर जागिर खाँदा लभ गर्ने फुर्सद के भयो होला र ?'- आमाको र मेरो दुवैको मनलाई शान्ति मिल्यो ।
म कोठामा छिरेँ, आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरेँ र मुसुक्क मुस्कुराउँदै भने- ‘दामी केटी घरमा बस्न आउने भई । अब केही हुन्छ ।’
भोलिपल्ट बिहानै म झ्यालबाट बाटो हेरिरहेको थिएँ । त्यही रातो स्कुटर हाम्रो घरमा आएर रोकियो । रातो स्कुटरको उनी पछिल्तिर थिइन्, हाँक्ने एउटा केटा थियो । केटा देख्नेबित्तिकै मेरो मुखबाट फुत्कियो, 'को भिलेन हो यो फेरि ।' धन्न सानो स्वरमा भनेँछु, कसैले सुनेनन् । उनी अघि लागिन् भने केटो हेल्मेट नखोली पछि लाग्यो । दुवैजना हाम्रो घरभित्र झिरे ।
उनी र त्यो केटो माथि आएको मैले भर्‍याङको आवाज सुनेर थाहा पाएँ । मनमा सोचेँ, 'केटो सँगै छ, के बाहिर जानु । एक्लै भएको भए पो यसो कुरा गर्दै लाइन हान्न पनि हुन्थ्यो । भिलेनको त्यो अनुहार हेरेर के लोदर लगाउनु ?'
म भित्रैबाट सुनिरहेको थिएँ, उसले आमालाई नमस्ते आन्टी भनी । आमाले अनौठो मान्दै, उ बाबु चैं को हो नि भनेर सोध्नुभयो ।
म भित्र कोठामा सुस्तरी बोलेँ, 'ठिक्क पर्‍याे । आमाले भिलेनलाई आउनै बन्द गर्दिए हुन्थ्यो नि ।'
उसले भनी, 'मेरो दाजु, कोठा सर्न गाह्रो हुन्छ होला भनेर आजै इलामबाट आउनु भको । अहिले चाबी लिइराखुम् भनेर । म भरे अफिस जानु छ । दाइले नै सबै काम सक्दिनुहुन्छ आजै ।'
त्यति सुन्नै बित्तिकै म कुदेर ढोकासम्म पुगेँ । तर झसंग सम्झेर फर्केर ऐनामा हेरेर कपाल मिलाएँ । र केही नभएजस्तो गर्दै बाहिर निस्केँ । उसको दाइलाई पुलुक्क हेरेर मनमनमा भनेँ, 'पछि ज्वाइँ भनेर मेरो खुट्टा ढोग्ने निधार त राम्रै रहेछ ।'
उनले पनि मलाई पिलिक्क हेरिन् र भनिन्, 'तपाईको नै पो हो घर ?' म लजाएँ । आमाले मलाई छक्क परेर हेर्नु भो । 'हिजो बाटोमा कोठा खाली भएको घर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले हाम्रै घर देखाइदिएँ'- मैले आमालाई हेरेर भनेँ ।
म कोठामा पसेँ । ऊ आमासँग के के कुरा गर्न थाली र फेरि नमस्ते भन्दै बाटो लागी । मैले झ्यालबाट हेरेँ । दाइले स्कुटी हाँक्यो । उ पछि बसी ।
साँझ पर्न लागेको थियो । म बाहिरबाट घर फर्कें । उसको कोठाको ढोकामा पर्दा लगाएको थियो । मनमनमा भनेँ, 'आइछ । एकपल्ट भेट्नुपर्ला कि ।' ढोका छेउमा पुगेपछि लाग्यो, 'आएकै दिन बिनाकारण गयो भने त भाउ नै दिन्न नि । जान हुन्न त्यसै त ।'
माथि कोठामा पुगेपछि आमाले भन्नुभयो, 'ती नानीलाई गेटको एउटा चाबी दे त । अघि बाबाले बनाएर ल्याइदिनु भएछ । पहिले बसेकासँग चाबी फिर्ता माग्नै बिर्सिएछ ।'
'आइसकी र ?' मैले आमातिर हेरेँ । आमाले मलाई गिज्याउँदै बोली बिगारेर भन्नु भयो, 'आइसकी र ? अघि तलबाट आउँदा देखिनस् ढोकामा पर्दा ।'
'खोइ, मैले त यादै गरिनँ' भन्दै म चाबी बोकेर उसको ढोका ढकढकाएँ । उसले ढोका खोली । घर बस्ने लुगामा बिछट्टै राम्री देखिएकी ।
चाबी दिँदै मैले भनेँ, 'हाइ म बिकेश । यो गेटको चाबी ।'
उसले मलाई देखेर मुस्कुराई र भनी 'अस्ति कोठा देखाइँदिदा थ्यांक्यु सम्म पनि भनिनँ । आज डबल थ्यांक्यु, बाइ द वे- म स्मिता' ।
'होइन थ्यांक्यु भन्नुपर्दैन, इट्स ओके ।'
म आफू बाटो लागेँ, घर छेलिएपछि चुरोट निकालेँ र जलाएँ । उसको अनुहार आँखामा आइरह्यो । घर फर्किंदा उसको ढोका हेरेको बन्द नै थियो, मात्र पर्दा झुन्डिरहेको थियो ।
म फाइनान्समा काम गर्थें । उनको मेरो घरबाट निक्लने समय र आइपुग्ने समय उस्तै । थोरबहुत बोलचाल हुन्थ्यो ।
शनिबारको दिन थियो । घरमै थिएँ म । उ पनि सायद घरमै थिई । फेसबुकमा सर्च मारेर एड गरेँ, रिक्वेस्ट पठाको २ सेकेन्डमा एसेप्ट भो ।
'ओहो, हाउ फास्ट ।' मैले लेखेँ ।
'म पनि अनलाइन थिएँ नि त, घरबेटी साप'- उसले इमोजी थप्दै लेखी ।
'के को घरबेटी नि । यो घरकी बुहारी तिमी नै त हौ'- तर म्यासेजमा चै लेखेँ- घरबेटी रे हाहा, यस्तो भन्न नपाई । यो तपाईंको पनि घर हो ।
'के रे ? नहँसाउनु न'- उसले कुरा बुझी क्यारे ।
मुख खोलेँ, 'आज शनिबार राम्रो टाइमपास हुने भो ।' थप रमाइलो कुरा गर्न टाइप गर्दै थिएँ । उतैबाट आयो म्यासेज, 'म बिजी छु । पछि कुरा गरुम् है । Have fun.' फेरि पनि लास्टमा इमोजी आयो ।
मैले मन नराम्रो पार्दै ओके मात्रै लेखेँ ।
साँझमा म छतमा लुकेर चुरोट पिइरहेको थिएँ । उ अगाडि आइपुगिछ । म तर्सिएर हातको चुरोट फुत्तै फ्यालेँ । उ खितितिति हाँसी ।
'तपाईं पो । म त बाबाआमा होला भनेर'- मैले भनेँ ।
'ए लुकीलुकी पो डढेलो लगाउँदै ?' उसले व्यंग्य गरी ।
म फिस्स हासेँ मात्रै ।
सुकाएका लुगा उठाएर उ हिँड्न लागेकी थिई । मैले भनेँ- 'छतबाट हेर्दा त शहर पनि कति राम्रो देखिन्छ ।' अँ भन्दै मेरो नजिक आएर उभिई । उ त्यो तपाईंको अस्पताल, उ त्यो फिल्म हल भन्दै मैले ठाउँहरू चिनाउन थालेँ । 'तपाई कता कता घुम्नु भको छ ?' मैले सोधेँ ।
'मैले त यहाँबाट एउटै ठाउँमात्रै चिनेँ'- उसले भनी ।
'कुन ?' मैले सोधेँ ।
'पानीट्यांकी'- उसले नगरपालिकाको पानीट्यांकी तिर देखाउँदै हाँसी ।
हामी निकैबेर के के यस्तै गफ गरेर बसिरह्यौँ ।
फेसबुकमा हाम्रो च्याटिङ बाक्लिन थाल्यो । एकदिन फेसबुकमै उसले नयाँ फिल्म आएको रहेछ भनी । मैले हेर्न जाने हो भनेर सोधेँ । उसले हुन्छ भनी ।
त्यो दिन फिल्म सँगै हेरियो । रेस्टुरेन्टमा सँगै खाइयो । आमाले थाहा पाउनुहुन्छ भनेर उसलाई पठाएर केहीबेरमा म घर फर्कें । उसले ढोका खुल्लै राखेकी रहिछ । पक्कै मेरै लागि थियो खुल्ला ढोका । ढोकाबाट चिहाएर हेरेको खाना पकाउँदै रहिछ । म नदेखीकनै माथि गएँ ।
त्यसपछि क्रमश: हामी सँगै हुन थाल्यौँ । च्याटमा पनि उत्तिकै व्यस्त हुन थाल्यौँ ।
दुई महिनापछि होला । एकदिन आँटैले च्याटमा लभ यु को स्टिकर पठाएको थिएँ । उता बाट लभ यु‍ टु लेखेरै आयो ।
'हैट, के पठाउँछे यो केटी' आफैलाई विश्वास भएन । च्याटमा सोध्न पनि मन लागेन । के कुरो रहेछ टुंगो गर्न सामान्य हुँदै उसको कोठामा पुगेँ ।
म भित्र पुग्नेबित्तिकै उसले ढोका लगाई र खुसी हुँदै भनी, 'पार्टी गर्ने हो ?'
'किन ?' मैले अचम्म मान्दै सोधेँ ।
'हाम्रो लभ परेकोमा'- उसले हाँस्दै मलाई हेर्दै भनी ।
मैले आफूलाई रोक्नै सकिनँ । उसको दुवै गालामा हात राख्दै उसलाई आफूतिर तानेँ । उ सहजै निहुरिदिई । मैले निधारमा चुम्बन गरेँ । उसले मलाई अंगालोमा कसी । मैले उसलाई पटक पटक आई लभ यु भने । उसले जवाफमा उति नै पटक आई लभ यु टु भनिरही । मैले बाहिरबाट खाना लिएर आएँ । उसले र मैले सँगै उसकै कोठामा मिठो चाउमिन खाएर हाम्रो लभ परेको पार्टी गर्यौं ।
त्यसपछि आमा बाबालाई झुक्याएर म उसको कोठामा गइरहेँ । उ पनि केही बहानामा मलाई भेट्न आइरहन थाली । हामी हाम्रा बाबाआमाले थाहा पाउलान् भनेर एकदमै सजग थियौँ ।
हामीले लभ परेको पार्टी गरेको दुई महिनापछि हुनुपर्छ- एकदिन बाबाले भन्नु भयो, 'तल्लो फ्ल्याट पूरै लिने मान्छे आका छन्, ती नानीलाई अर्कैतिर सर भन्नु पर्‍यो ।'
म झस्किएँ । केही बोलिनँ ।
आमाले मेरो मुखतिर हेर्नु भो र हाँस्दै भन्नु भो- 'ती नानीलाई अर्कैतिर चाहिँ होइन, माथितिर चाँहि सर भन्नुपर्ला ।'
आमाको कुरा सुनेर म त तीनछक्क परेँ । 'आमालाई कसरी थाहा भयो'- मनमा सोचेँ ।
आमाले मलाई जिस्काउँदै भन्नुभो- 'मलाई सबै थाहा छ । राम्री केटीसँग परेको छस् । छिट्टै बिहा गर्नुपर्छ । उसलाई भनेर कहिले माग्न जानु भन्ने टुंगो गर् लठुवा ।' आमाले लठुवा पनि कति मीठो गरेर भन्न सक्नु हुन्छ । म खुसी र अचम्ममा केही बोल्नै सकिनँ ।
घरमा डेरा बस्न आएकी उ आज त्यही घरकी बुहारी छ । उसँग म एकदमै खुसी छु । एकाबिहानै म उठ्न अल्छी गर्छु र उसले बनाएको चिया त्यसै चिसो हुन्छ । उसले 'चिया चिसो भएको थाहा छैन ?' भनेर सोध्दा उही पहिलो भेटमा उसले सोधेको सम्झन्छु, 'दाइ यतातिर कतै कोठा खाली भएको थाहा छैन तपाईंलाई ?'